Kungani GUBT | I-Chengdu GUBT Industry Co., Ltd.
Amahora angu-24 x izinsuku ezingu-7
Izingxenye ze-VSI Gqoka
Izingxenye ezisele ze-VSI
I-GUBT inonjiniyela abaqeqeshwe kakhulu abangu-30+, abasebenzi abangochwepheshe abangu-120+, izinkundla zokucobelelana ngolwazi ezi-4 ezinganwebeki kahle, 1000+ Molds, isethi egcwele yezindawo zokuhlola izinga. Ngokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-30+ ekwenzeni izingxenye ze-crusher zekhwalithi ephezulu, i-GUBT ingumnikezeli wakho othembekile.
I-GUBT inikeza uhla olugcwele lwezingxenye zemishini. Ukufakwa komkhiqizo wayo okubanzi kukunikeza ithuba lokuthenga izinto eziphelele nezifanisiwe ngesikhathi esisodwa. Iyonga isikhathi futhi yonga izindleko.
I-GUBT inethimba labadayisi elite elinokuhlangenwe nakho okumaphakathi kweminyaka engu-8 embonini. Bangabeluleki bakho abahle ngokukhetha imikhiqizo efanele, ukuphatha izinkinga ze-crusher, ukubhekana nokukhiqiza nokulethwa, nokuhlinzeka ngosekelo lochwepheshe lobuchwepheshe. Ayatholakala ukuze athole usizo lochwepheshe 24/7 ukuze akusize.
I-GUBT igcina imisha futhi ithuthukisa ukusebenza kwezingxenye ezigqokile. Ngokwezibalo ezingaphelele, amakhasimende asebenzisa izingxenye ze-GUBT crusher azoba nempilo yokugqoka isikhathi eside ngo-10% -15% uma kuqhathaniswa nezinga lemboni. Izokonga kakhulu futhi ivikeleke.
Ikheli:Building4, 486 Guanghua 3rd East Road, Qingyang, Chengdu, Sichuan, 610031
Wonke amagama emikhiqizo, amagama amamodeli noma amamaki aphethwe abakhiqizi abahlukene. I-GUBT ayihlangene ne-OEM. Le migomo isetshenziselwa izinjongo zokuhlonza kuphela futhi ayihloselwe ukukhombisa ukusebenzelana noma ukugunyazwa yi-OEM. Zonke izingxenye zakhiwe, futhi zigunyazwe yi-GUBT futhi azikhiqizwa, zithengiwe noma zigunyazwe yi-OEM.
Sithumele umlayezo, sizokuthinta maduze.